Jasmine : 2014
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, December 13, 2014
ရင်ဘတ်ထဲမျော်လင့်ချက်လေးတွေ တလိမ့်လိမ့် စီးဆင်းလာလေရဲ့ကွယ်။
ကံဇာတ်ဆရာရဲ့ အကြိုက်တော့ လိုက်ကရမယ်ထင်တယ်။
ခုရက်တွေ ကောင်းကင်က ပိုပြီးမှောင်မိုက်လာတယ်
မြူလိုလို နှင်းလိုလို အကျပိုလာတယ်
အချိန်မတော်လန့်ဖြန့်ပြီး အိပ်ယာက နိုးနိုးလာတတ်တယ်။
ဗြမဟ္မာစိုရ်တရား သူ့တို့ရင်ဘတ်ထဲ ထဲ့မထားသူတွေများလာတယ်
ဖေးမမည့်သူ မျော်လင့်နေလဲ သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲ ကိုယ်ရှိမနေခဲ့
သိခဲ့ပြီ သိနေတယ် သိရအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်
မျော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် မျော်လင့်နေတယ် မျော်လင့်နေအုန်းမယ်ကွယ်
ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်တချို့အတွက်ပေါ့ ။
ငါ့ မျက်လုံးတွေ မှေးစက်ခွင့်မရတာကြခဲ့ပြီ ။ ။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, December 1, 2014
ဒီအချိန်မှာ ၀ါဝါထိန် ချစ်သူတို့လျှောက်သောလမ်းနားက
နှင်းရည်တွေ နှလုံးသားကို လာပုတ်
အရုပ် တရုပ်လို မခံစားတတ်ခဲ့ရင် ကောင်းမယ်
မအီ မသာနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုး
ကြည်ကြည်သာသာ နဲ့ ငါ့ အလွမ်းပင်တွေ
ရင်ထဲ ပျိုးပြီးရင်း ပျိုးနေခဲ့တယ်။
နေရာမရွှေး ရောက် ရောက်လာတယ်
အဲဒီ စလောင်း မင်းသိလားကွယ်
ငယ်ငယ် ကနားထောင်ဖူးတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပိုဒ်
ချမ်းလဲ ချမ်းတယ် လွမ်းလဲ လွမ်းတယ်တဲ့ ။
ကဗျာဟောင်းလေးကို ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီး စာသားတချို့ဖြည့်ထားတာပါ။
ချစ်ခင်ရပါသော ညီမလေး ဆွေလေးမွန်ရဲ့ တဂ့်ကဗျာ
Labels: အလွမ်း ကဗျာ
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, October 29, 2014
တမြေ့မြေ့နဲ့ လောင်ကျွမ်း လွမ်းနေရသူ
ခနော်နီခနော်နဲ့ လမ်းတွေကို သတိရနေမိသူ
မကြာခဏ အရှုံးတွေပဲ ရင်ဆိုင်နေရတယ် ။
အပြုံးလက်ဆောင်တွေကို လက်မရှောင်ပဲတွေ့ပါရစေတော့ ။
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, October 22, 2014
အလတ်ကြီးရှိနေသေးတဲ့ ငါ့ နှလုံးသားကို
ဖြူစင်မှု တခုထဲကိုပဲ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ငါ
အပြုံးဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ မေ့တေ့တေ့ ။
တိတ်တိတ်လေး သူ ပြန်ဝင်သွားခဲ့တယ်
ကိုယ့် အတ္တ ကိုယ်မမြင်
သူတပါး အတ္ထုပတ္တိ ကိုတော့ ဖွင့်ပြနေတဲ့လောက
အရေခြုံနေတဲ့ သူတွေထဲကနေ ငါ ရုန်းထွက်ရမယ်
ငါ မသောက်မိဖို့အရေးကြီးတယ် ။
ငါ ကိုယ်တိုင်ကလဲ မရင့်ကျက်ဘူး
သူ တို့ကလဲ လူယဉ်ကျေး မဟုတ်ဘူး
ငါ မပြုံးချင်ဘူးဆိုရင် လုံးဝပဲ
သူ သီခံပြီးပြုံးတတ်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ် ။
လုပ်သမျှ အဟုတ်ထင်နေသူထဲ ငါလဲ ပါတယ်
ငါ့ ဘ၀အမှန်ကဘာလဲ ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, October 18, 2014
သံယောဇဉ် အသင်္ချေ တွေ ရင်ဘတ်ထဲ ၀င်လာစေတဲ့ သူ
အနားသတ်တွေ လှပအောင် လမ်းပြပေးတဲ့ သူ
သဲဖြူခင်းပြီး စံပယ်တွေ ကာရံပေးခဲ့ သူ
ခပ် ပါးပါးသာကျန်တဲ့ မျော်လင့်ချက်လေးကို အရောက်တင်ပေးခဲ့ သူ
ကိုယ် ကြိုက်တတ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရှာဖွေဖွင့်ပေးတတ် သူ
မိုးရာသီရဲ့ ဟန်ပန်တွေ ဘာမှ မရှိတဲ့နေရာ တခု
နှင်းထုတွေ ဖုန်းလွှမ်းတဲ့ အရပ်ဒေသ
အရိုးထဲ စိမ့်ပြီး အေးလွန်းတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ
ယုယ ကြင်နာပေး တတ်သူ
အဲတာ ကျွန်မချစ်ရသူပါ ။
စာတွေ များများတင်နိုင်အောင်လို့ တဂ်ပါရစေရှင်
Posted by စံပယ်ချို | Friday, October 10, 2014
မိသားစု - ချစ်သူ - မ်ိတ်ဆွေ - သူငယ်ချင်း
ငါ ကြိုဆိုလျှက်ပါ ။
သိမ်မွေ့မှု မရှိတဲ့ အရာအားလုံး
နှလုံးသားထဲ ကြာရှည်မထားချင်ခဲ့သူ ။
ငါ တခါမျှ အခါအခွင့် မရခဲ့ပါ ။
အသူရဲ့ Tag ကိုရေးတဲ့ ကဗျာပါ။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, October 6, 2014
ကဗျာဖြစ်ဖို့ ရင်ခုန်သံ ရှာစရာလိုပါသလား?
အတ္ထုပတ္တိမှာ အရောင်ခါးတွေ မပါဖို့ အရေးကြီးတာလား?
အဖန်တရာ အမှတ်မရှိတဲ့ ကြင်နာစိတ်
သံယောဇဉ်ရဲ့ အပြင်ဖက်ကို လမ်းလျှေက်ကြည့်မိတော့
နှလုံးသားက ထွက်လာတဲ့ အရောင်ရင့်ရင့်သွေးစက်တွေနဲ့
မရှောင်နိုင်ခဲ့တာ ငါ ကိုယ်တိုင် သိနေခဲ့တာ
သမုဒ္ဒယ တွေ ကလဲ ထားခဲ့ဖူးတာကိုး
အတ္ထုပတ္တိ တချို့ အတွက်ယုတ္ထိဗေဒ သိပ်မရှိဘူးလေ
ခဏခဏ ကျရှုံးဖူးတာ ၀မ်းနည်းနေရင်တော့
ဒီမှတ်တိုင်ကနေ ပန်းတိုင်ကို မရောက်ဘူး(ကိုယ့်ဟာကိုသိခြင်း)
ချစ်သူ ငါ့လက်ကို ဆက်လက်တွဲပေးပါ ။ ။
(သံဝေဂများနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ)မှာTag ထားခြင်းကြောင့်ပြန်ချေပြီးတင်တဲ့ကဗျာပါ
ဆက်လက်ပြီး Tag ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကတော့
တို့ ၅ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, September 29, 2014
အဲတာ ကျွန်တော့် ချစ်သူပါပဲ။
တင်ပြီး ကျွန်မကို ပြန် Tag ထားတဲ့ပိုစ့်လေးပါ။
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, September 21, 2014
ကိုယ့် အတ္တ ကိုယ်စားပြီး
ငါရေးတဲ့ ငါ့ကဗျာတွေ သန့်ဖို့ ပိုပြီးအရေးကြီးနေတယ်။
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, September 14, 2014
ငါ့ နှလုံးသား သွေးတွေထွက်နေပါလား
ကျေနပ် နေရတာပါကွယ် ။
ကျကျ လာခဲ့တယ် ။
ပိုးကုန်ပြီး ကျွန်မဘာမှ မတတ်ခဲ့ပါ ။
ကျွန်မရဲ့ အနာဂါတ်တွေ ပျက်ခဲ့ရပြီ ။
သန့်စင်တဲ့ ဒဏ်ရာဖြူပဲ ဖြစ်ပါရစေကွယ် ။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, September 8, 2014
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့် ခန္ဓာတောင်
ဘယ်မှာလဲ တို့ရွာ ။
ငါတို့ လုံးဝ မစားသုံးခဲ့ဖူးပါ ။
ကော်ဖီခါးခါးတခွက် လျှာထဲစိမ့်ဝင် ဖြတ်သန်းသွားသလို
ခံစားချက်တွေ အနည်းငယ် သက်သာမလားပဲ ။
တာဝန်တခုလို ထမ်းထားရတာလား .....
လူတွေကို ဒုက္ခ ပေးနေခဲ့တာပါ.....
တခါထဲ ရာနှုန်းပြည့် (၁၀၀%) လောက်နာကျင်လိုက်တာ
Tag ထားတာမို့ ထပ်ပြီးတင်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးပါ
ထပ်ပြီး Tag ရမှမို့ရေးဖို့ အချိန်လေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်
http://snowmay1987.blogspot.com/(MY GREEN LIFE)
မိုးသက် @ မေမြို့မိုး
Posted by စံပယ်ချို | Friday, September 5, 2014
နှင်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်
မြင်းကြီး ၂ ခါမောနေမှာစိုးလို့
ရာသီစာတွေ ဖောသီတဲ့ ငါ့ အရပ် ငါ့ ဒေသ
ပွင့်လင်းရာသီရော မိုးရာသီပါလှပနေတဲ့ နေရာ
ငါ မလွမ်းဘယ်ရှိပါ့မလဲ ။
ငါ့ တို့မြို့ရဲ့ အရှေ့ဖက်ကိုကြည့်လိုက်
မကြာခင် နှင်းထုတွေ ဖုန်းတော့မယ်
ငါ တို့ဖက်မှာ ည
သူ တို့ ဖက်မှာ နေ့
ငါ့မြင်းကြီး ဘယ်တော့နေရပ်ကို ပြန်နိုင်မလဲကွယ် ။
ပစ်ရေ ရေးလိုက်ပြီနော် ကဗျာလေးပါပဲ စာရေးအဆင်မပြေလို့နော်
သူများတွေကတော့ ဘလော့ဂါ ၁၀ ယောက်ကို ဆက်ပြီး တဂ် ကြပါတယ်
သိရသလောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ် ဒါကြောင့် ဆက်ပြီး မတဂ်တော့ဘူးနော်။
ပစ်ရေ သာဂျီးကါန်မက်လေးဖတ်ပြီးမှ ပြန်ဖြည့်လိုက်တယ်နော်
သာဂျီးမင်းက လုပ်ပြီးသားလူတွကို ဆက်လုပ်မိလဲရပါတယ်ဆိုလိုိ့
Posted by စံပယ်ချို | Friday, August 29, 2014
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရ ရေးဖို့ ကိုယ်တိုင်ရှက်နေမိပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘလော့ပေါ်ဘာမှ တာဝန်မကျေခဲ့သူတယောက်ပါ။ တီတင့်ပြောသလိုပါပဲ အချိန်လေးရတုန်းဖုန်ခါတဲ့သဘောဆိုလဲ မမှားပါဘူးရှင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ စကားကို ဥပေက္ခာ မပြုချင်တာလဲအပါအ၀င်မို့ သိသလို တတ်သလို ဟန်လုပ်ပြီး (အချိန်လုကာ) ရေးသားလိုက်ပါတယ်ရှင် ။
ဘလော့ ကိုစပြီးရေးသားကတဲက သိလို့ တတ်လို့ရေးတာလဲမဟုတ်ခဲ့ပါ ငယ်ငယ်ကတဲက မရေးရ မနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမို့ အမြင်မတော်သူ အိမ်ကလူ(ကိုလွင်ပြင်)က ဘလော့လေးတခုကိုစတင်ပြီးဖွင့်ပေး
ခဲ့လို့သာ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာများစွားကို တင်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ February 14, 2011 မှ စတင်ပြီးဘလော့လေးကိုဖွင့်ခဲ့တာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့ အားပေးမှုကြောင့် ယနေ့တိုင်အောင်ပါပဲရှင် ။ ဘလော့ဒေး ဆိုတာလဲ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်တခါမှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့သလို ဘာကြောင့်သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလဲ မသိခဲ့ပါဘူး ခုတော့ ဘလော့တွေလည်ပတ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်အတော်လေးသိခဲ့ရပါတယ်ဘလော့တွေကို အလည်သွားပြီးစာတွေ ကဗျာတွေဖတ်ခဲ့ရတာလဲ ကျွန်မအတွက်တော့ပျော်စရာတမျိုးပါပဲ- ဒီနေ့ထိ ကိုယ်တိုင်ဘလော့ဂါလို့မထင်မိတာတကယ်ပါ ၊ နောက်ပိုင်းပိုပြီးဆိုးမလားပဲ အိမ်အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ ကိုယ့်မျိုးသားအတွက်လုပ်ကိုင်ပေးရတာနဲ့ ကျောင်းတဖက်ပြေးရတာနဲ့ ကိစ္စ တွေအများသားမို့ ဘလော့ဂါ အားလုံးကို အားနာနေမိတယ်. ကိုယ့်ကဗျာကိုယ်ချစ်ရတာမို့ရယ် သူများတင်တဲ့ ဗဟုသုတ - အက်ဆေး - ဟာသ - ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ - ရသ - အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကဗျာ အဲတာလေးတွေကိုလဲမဖတ်ပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါရှင်။
ကျွန်မရေးသမျှ အမြဲလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကို လေးစားပြီး ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါရှင် ။ ကဗျာတွေရေးဖို့အချိန်တိုင်း အားပေးတဲ့ ခဲ့တဲ့ အိမ်ကလူ ကိုလဲ ရာသက်ပန်ကျေးဇူးတင်ပြီး ရိုးမြေကျ တူတူလက်တွဲရပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ဖူးပါတယ် (ဘလော့ဒေးနဲ့ဘာမျှမဆိုင်ပေမဲ့) ကျွန်မအတွက် ဘလော့ဆိုတာ သူကဖြစ်လာခဲ့တာပါ. နောက်တခုကတော့ Comment တွေအများကြီးလိုချင်လို့ဘလော့ရေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လဲ Comment လေးတခုလောက်တွေ့လိုက်ရရင်ပဲ နှလုံးသားကိုပျားရည်လောင်းသလိုခံစားလိုက်ရတဲ့အရသာ ကျွန်မကြိုက်ခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် အလည်သက်သက်လာတဲ့သူ-Comment လေးချန်ခဲ့သူ
ကိုယ်တိုင်လဲ အားလတ်တဲ့အချိန်တိုင်း မိတ်ဆွေအားလုံးရဲ့ ဘလော့တွေထဲ ၀င်ရောက်လည်ပတ်ပြီးအားပေးနေမှာပါရှင် ။ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးပြီးတဲ့ဘလော့ဂါတွေကိုထပ်ပြီးတွေ့ဆုံချင်မိသလို မတွေ့ဖူး မမြင်ဖူးသေးတဲ့ လလော့ဂါတွေကိုလဲ အပြင်မှာတွေ့ဖူးမြင်ဖူးချင်ပါတယ် ။
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, August 16, 2014
နှင်းစက်တွေ မြေခတဲ့ ရာသီ
Planetarium ထဲ ငါရောက်နေတဲ့အချိန်
ငါ တိုးဝင်နေမိပြီလေ ။
မကြာခင် ရောက်လာမဲ့ ဆောင်းဦး
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, July 12, 2014
ရင်ထဲမှာတော့ အားလုံးဗလာဖြစ်နေပြီ ။
ဘာအရာမှ မရှိခဲ့ဘူး ။
ငါ ကြိုဆိုနေမှာပါ ။
ခံစားရဖူးတဲ့​ အကြောင်းရင်း တချို့
Posted by စံပယ်ချို | Friday, June 20, 2014
တခါလာလဲ ဒီ အစ ကိုပြန်ဆွဲထုပ်
ရင်ဘတ်ထဲ မှာတော့ ရွဲရွဲစိုနေတယ်
နှလုံးသား က ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေပေါ့ ။
တပြိုင်နက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အချိန်ရာသီပေါ့
မိမိ ဆန္ဒမပါပဲ ကြည့်နေရတဲ့ အချိန် ။
ဘ၀ရဲ့ အစုတ်ပဲ့ ဆုံးအရသာလေးက
ဘာများလဲ လို့ မေးခံခဲ့ရရင်
အချစ် စစ်စစ် ကို လက်လွှတ် လိုက်ရတဲ့ အရသာ ပါပဲ ။
နွံနစ်တဲ့ ခံစားချက် - သွေးခြေဥတဲ့ နှလုံးသား
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, June 8, 2014
အချိုပေါ့လာတဲ့ ချစ်သူ နှလုံးသား
ကိုယ့် ကဗျာ မျက်ရည်ဆားလေးခတ်လိုက်မိတယ်
အခါးဓါတ်တွေ ထင်တာထက် ပိုပြီးများနေတာ
ချိုမြိန်ခြင်းတွေ ကုန်ဆုံးလို့လားကွယ် ။
လောဘ နွံ သောကနွံ သံယာဇဉ်နွံ
ဘာနွံလဲ ကိုယ်တိုင်လဲမသိတော့ ခက်ပြီကွယ် ။
ခုတော့လဲ သံယောဇဉ်တွေပါး ပါးလာလို့ထင်ပါတယ်
ပန်းသီးအရသာလဲ ခါး လို့လာပြီ။
ပျောက်ဆုံးသားတဲ့ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးတွေအတွက်
နှလုံးသားနုနု သွေးခြေဥနေရပြီ ။
သင့်ကြောင့် ကျွန်မ လူဆိုးမဖြစ်ချင်ပါ
Posted by စံပယ်ချို | Monday, May 26, 2014
ခြသေ့င်္ တကောင်ရဲ့ အကြည့်တွေနဲ့
ကျွန်မရဲ့ ခင်မင်မှု အမျှင်တန်းလျှက်ရှိနေမှာပါ။
သင့်ကြာင့် ကျွန်မရဲ့ ဖြူစင်မှု
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, May 13, 2014
အချိန်တွေ တတိတိနဲ့ ရွေ့လျား
သတိရမှု တမ်းတမှု ဒုနဲ့ဒေး
အသင်းဝင် တယောက်လို ရင်းနှီးစေခဲ့ပြီ
မိမိရဲ့ အကြည့်တို့ ခပ်နွမ်းနွမ်း
အပြုံး ကလဲ ခပ်နွမ်းနွမ်း
အားလုံး နွမ်းနေလဲ ချစ်သူကို ချစ်တဲ့ နှလုံးသား
အမှားဆိုတဲ့ ကျင်းထဲက ပြန်မထွက်နိုင်
ဘာများကိုယ့်အတွက် အဟာရ ရှိသလဲကွယ်
နောက်ဆုံးတော့ ကဗျာတွေ တပုဒ်ပြီးတပုဒ် ငါ ရနေမိတာပါ။
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, May 1, 2014
ရင်ဘတ်ထဲမှာ သပွတ်အူလို အမှိုက်များ
ငါရော မင်းပါ တခြားသူအပါအ၀င်
မှောက်ကျနေတဲ့ အဌား သိက္ခာ တွေအများဆုံးပေါ့
တမ်းတချင်း လွမ်းရချင်းတွေကို သွေးမျက်ရည်ဖုန်းပြီကွယ်
ဟိုးအဝေးကို လှမ်းကြည့်မိတော့ သံစဉ်ပျက်ကို
အက်ကွဲတဲ့ ဂီတာ နဲ့ တီးနေရသလို
ကာရံ မပါတဲ့ ကဗျာတွေ အတွက်
နောင်တ တွေ မျိုချ သောက်သုံးရင်း >>>>>>>>>>>>>>>>>
မြတ်နိုးတွယ်တာစရာ ကောင်းတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကိုငုံပြီး
နွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားလေးကို ထွေးပိုက်ထားတဲ့
ကဗျာချစ်သူ တယောက်မျှသာ ။